यी हुन् भगवान गणेशका ११ स्वरुप, कस्को पूजा गर्दा के फल मिल्छ ? – Namaste Host
February 9, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on यी हुन् भगवान गणेशका ११ स्वरुप, कस्को पूजा गर्दा के फल मिल्छ ?
हिन्दूधर्मअनुसार मंगलबार विशेष गरी गणेश भगवानको पूजाआराधना गरिन्छ । सबै किसिमको दुःख निवारणका लागि भगवान श्रीगणेशको पूजा गरिन्छ ।
त्यसोत कुनै पनि शुभ कार्य गर्दा सबैभन्दा पहिलो गणेशको पूजा गर्ने गरिन्छ । मंगलाचरणको शुरुमै ॐ श्री गणेशाय नमः मन्त्रोच्चारणबाट नै कामको थालनी गरिएको हुन्छ ।
भगवान गणेशका विभिन्न स्वरुप मध्ये तपाईले सेतो गणेशको प्रतिमा देख्नुभएको होला । मठ मन्दिरमा समेत गणेश भगवानको सेतो प्रतिमा हुन्छन् । बजारमा पनि सेतो गणेशको मूर्ति किन्न पाइन्छ । यीनलाई ‘श्वेतार्क गणपति’ पनि भनिन्छ । ‘श्वेतार्क गणपति’को प्रतिमा घरमा स्थापित गर्नाले घरका सवै सदस्यहरुको दःख निवारण हुने धार्मिक विश्वास छ ।
मोरक्कोमा भीषण वर्षा र बाढी, कम्तीमा २४ जनाको मृत्यु
February 11, 2021 Bijay Lama